पोखरादेखि न्याय खोज्दै सिंहदरबार आइन् चित्रा ! | Ratopati
पोखरादेखि न्याय खोज्दै सिंहदरबार आइन् चित्रा !
पोखरा – चित्राका समस्या गहिरा छन् । त्यो भन्दा गहिरो उनको हृदयमा बसेको खत छ । बद्नामी हुनु परेको पीडाले उनलाई पिरोल्छ । गत बैशाख २२ गते रातोपाटी डटकममा एउटा समाचार छापियो । समाचारको शीर्षक थियो ‘नखाएको विष पनि लाग्ने रहेछ’ ।
‘सम्पत्ति त गयो गयो । इज्जत पनि गयो,’ रातोपाटीसँग दुखेसो पोख्दै उनले भनिन्, ‘जीवनभर साथ दिन्छु भन्ने साथी पनि गए । तर अब भने न्याय पाउँछु कि भन्ने आश जाँगेको छ ।’ उनी थप्छिन्, ‘हाकिम सावहरुले पनि हुन्छ भन्नु भएको छ । अब त होला नि !’
साविकको छिनडाँडा गाविस हाल पोखरा महानगरपालिका १७ मा पर्ने जग्गा (सेती नदी किनार)मा करिब २÷३ सय सुकुम्बासीको परिवार छ । ‘एक त नदी किनारको जग्गा । त्यसमाथि सुकुम्वासी वस्तीको बाहुल्यता,’ उनले भने, ‘सरकारले नयाँ नक्सा कायम गरेको हुनाले पनि जग्गा यताउति भएको हो ।’ बर्खायाममा नदीको बहाब बढ्ने हुनाले जग्गा कटानमा पर्ने गरेको उनले सुनाए ।